ချို့တဲ့ပြီးခက်ခဲနေကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အစားအသောက်တွေပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း - News MM
ပရိသတျကွီးရေ.. အကယျဒမီမငျးသားကွီး ဝဠေုကြောျကိုယျတိုငျဦးစီးတညျထောငျထားတဲ့ ဝဠေုကြောျဖောငျဒေးရှငျးကတော့ အမြိုးမြိုးသော အခကျအခဲတှနေဲ့ရငျဆိုငျကွုံတှေ့နကွေရတဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ အမွဲဖေးမကူညီတတျနတော ဖွဈပါတယျ..။
၇ရကျသားသမီးအလှူရှငျတှေ လှူဒါနျးထားတဲ့ ငှကွေေးတှနေဲ့ လိုအပျနကွေတဲ့ပွညျသူတှအေတှကျ ပွနျလညျလှူဒါနျးမှုတှကေိုလုပျဆောငျနပွေီး လကျရှိအခွအေနတှေမှောလညျး အငျတိုကျအားတိုကျပါဝငျအားဖွည့ျလှူဒါနျးနတော တှေ့ရပါတယျ..။.
ပရဟိတအလုပျတှနေဲ့ လှူဒါနျးမှုတှနေေ့တိုငျးပွုလုပျနတေဲ့ ဝဠေုကြောျကတော့ ဒီကနေ့မှာလညျး စားဝတျနရေေးခကျခဲနတေဲ့ ပွညျသူတှနေဲ့ စကျမှုဝနျထမျးတှအေတှကျ အစားအသောကျတှေ ပေးဝလှေူဒါနျးခဲ့ပွနျပါတယျ..။
သငျ်ဃနျးကြှနျးက ပွညျသူတှနေဲ့ စကျမှုဝနျထမျးတှအေတှကျ ဝဠေုကြောျက စားသောကျကုနျတှကေို ကိုယျတိုငျကိုယျကအြိမျတိုငျရာရောကျ လိုကျလံပေးဝပွေီး လှူဒါနျးခဲ့တာဖွဈပွီး
စတေနာရှငျတှအေနနေဲ့ နောကျထပျအလှူတှမှောပါဝငျနိုငျဖို့ကိုလညျး အလှူခံတိုကျတှနျးထားတာလညျး တှေ့ရပါတယျ..။
အလှူရှငျမြားကိုယျစား စားသောကျရေးခကျခဲနသေော သဃျနျးကြှနျးဇ / မွောကျ ကြူးအိမျမြား နှင့ျ စကျမှု (၁)ဝနျထမျး အိမျထောငျစု ၅၅စု သို့ တဈအိမျထောငျလြှငျဆနျ ၃ပွညျ၊ကွကျသှနျ၊ငါးပိ တို့ကို သှားရောကျ ကူညီထောကျပံ့ပေးခဲ့ပါသညျ။
နောကျထပျ လိုအပျနသေူမြားအတှကျလညျး အလှူခံပါတယျ။
09776089484(Wave Acc). .” ဆိုပွီး အလှူကို အသိပေးဝမြှေရငျး ဆကျသှယျလှူဒါနျးနိုငျတဲ့အကွောငျးကိုလညျး ပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
အလှူရှငျတှရေဲ့ကိုယျစား ကိုယျတိုငျသှားရောကျလှူဒါနျးထားတဲ့ ဖောငျဒေးရှငျးရဲ့အလှူပုံရိပျတှကေိုလညျး အားလုံးက သာဓုခေါျဆုတောငျးပေးထားကွတာလညျး တှေ့ရတာမို့ ပရိသတျတှအေတှကျတငျဆကျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ..။
Previous Article သာကေတနဲ့ တောင်ဒဂုံကြားက ကျူးကျော် တဲလေးတွေမှာ နေထိုင်သူများရဲ့ အခြေအနေ
Next Article လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ရင်း ကလေးမြို့တွင် ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းလေးဦးအတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေတဲ့ သက်မွန်မြင့်